Nezvedu - Shanghai P & Q mwenje Co., Ltd.
Shanghai P&Q Mwenje Co., Ltd.
Shanghai P&Q Lighting Co, Ltd. yakavambwa muna2005 inyanzvi yekugadzira mwenje mune yekufa-kukanda, jekiseni repurasitiki, uye jira simbi.
Inovandudza kubva kune diki kuita hombe ine yayo yekufa-kukanda uye gungano fekitori muHaining nhanho nhanho. Die vachikanda muchina kubva matani 200 ~ 800tons. Isu tinoramba tichiisa mari mumidziyo mitsva kuti tibudirire kutarisana nedambudziko rekuenderera zvirinani, uye tinogara tichipa mhinduro dzakakodzera pane zvese zvinodikanwa muvatengi vedu.
P & Q haina jekiseni repurasitiki uye jira simbi fekitori, asi inogona zvakare kupa epurasitiki jekiseni uye jira simbi zvikamu zvinoenderana nevatengi chinodiwa.
Uye nekuda kwemitemo mitatu yekutanga yatinoteedzera kune iwo makore ehunyanzvi kune mwenje, kutendeseka kune vatengi, uye mutoro kwatiri. Nekuda kweizvi, isu zvishoma nezvishoma tinokunda vatengi vedu kuvimba uye zvakagadzwa kubatana kunofadza uye kwenguva refu pamwe nemamwe makambani epasirese anozivikanwa pasirese, akadai seBraums Australia, Pierlite, Gerard Lighting Group, SYLVANIA, LENA Lighting, LUG Light Factory , nezvimwe.
Hi-Tech Kugadzira Midziyo
Yedu yepakati yekugadzira michina inotumirwa zvakananga kubva kuTaiwan.
Yakasimba R & D Simba
Vagadziri vane ruzivo vanogona kubatsira kugadzirisa matambudziko akasiyana panguva yekugadzira uye yekugadzira nhanho.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa muP & Q ISO9001 mafekitori akaomeserwa emhando yepamusoro kudzora kufambira mberi musangano weAmerica, Australia uye nemitemo yeEurope.
P & Q gungano Fekitori
P & Q mwenje yakavambwa naFrank Ji, fekitori iri muSongjiang, Shanghai
P&Q inoshanda pamwe neyakagadzika mwenje weAustralia Gerard Lighting Group.
P & Q kufa vachikanda musangano wakasimbiswa. Fekitori ISO9001 yakasimbiswa.
P & Q kufa vachikanda uye fekitori yegungano inoenda kuHaining, Zhejiang,
Kugadzirwa kweP & Q & manejimendi kutanga kushanda kunoenderana neE ERP system.
Isu tiri nyanzvi mukugadzirwa kwekucheka kufa tooling yekucheka uye kuumba kwezvikamu. Midziyo iyi inovandudza kufanana uye inobvumidza kuwana zvidimbu zvidimbu pasina kudiwa kwekuwedzera kwemashini mashandiro.
Hakananga ekurapa kwepamusoro zvinoenderana nezvinodiwa uye zvinotevera maitiro.
Dzakanaka makorari dzimba ne hasha vibration uye simbi bhora kupfura nenyunje zvivakwa ita kuti zvikwanisike kuti uwane yepamusoro yepamusoro pekupedzisa.
P&Q inotarisira chero imwe yakakumbirwa yakakosha yekupedzisa mashandiro
(Kuputira, kupukuta, nezvimwewo), ine yakazara warandi mune yemhando uye yekupedzisira mhedzisiro.
Mabasa Anotyisa Anotarisirwa Nechikwata Chedu'Akapa Kune Vedu Vatengi!